जनप्रतिनिधि र ठेकेदारको मिलेमतोमा खोला दोहन
भद्रपुर । जिल्ला अनुगमन समिति झापाले स्थानीय तहकै मिलेमतोमा ठेकेदारबाट खोला दोहन भइरहेको जनाएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलको संयोजकत्वमा झापामा गठन भएको अधिकार सम्‍पन्‍न अनुगमन समितिले बिहीबार पत्रकार..
काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले १ हजार २४० कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । केन्द्रले २८ जिल्लाका ४५० सरकारी कार्यालयमा छड्के अनुगमन गर्दा एक हजार २४० कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि..
भित्रिए चार ब्रुमर, काठमाडौं महानगरले चैतबाट बाटो सफा गर्ने, कुन कुन ठाउँमा प्रयोग हुन्छ ?
काठमाडौं । आउदो चैतदेखि राजधानीको सडकको धुलो ब्रुमरले सफा गर्ने भएको छ । काठमाडौं महानगरले चारवटा ब्रमुर नेपाल भित्र्याएपछि चैत देखि ती ब्रुमर प्रयोग गरी सडक सफा गरिने भएको छ..
फेसबुकमा क्विज खेल्नुहुन्छ ? सावधान ! यसरी हुन्छ डाटा लिक
युक्रेनमा बस्ने दुईजना युवकहरुले एक अनलाइन क्विजका माध्यमबाट ६० हजारभन्दा धेरै फेसबुक प्रयोगकर्ताको फेसबुक प्रोफाइल डाटा चोरी गर्न सफल भएका छन् । अनलाइन क्विजको माध्यमबाट प्रयोगकर्ताको ब्राउजरमा भाइरसयुक्त एक्सटेन्सन इन्स्टल गराएर..
बेहुलाले रक्सी खाएपछि बिहे रद्द
भारतको बिहार राज्यस्थित डुमरी छपिया गाउँकी एक बेहुलीले मदिरा सेवन गरेर बिहे मण्डपमा आइपुगेका बेहुलासँग विवाह गर्न अस्वीकार गरेकी छिन् । रिन्की कुमारीको बब्लु कुमारसँग शनिबार विवाह गर्नेगरी तय भएको थियो..
अमेरिकी उत्पादन बोइङ ७३७ को सुरक्षामा प्रश्न, चिनले लगायो तत्काल उडाउन प्रतिबन्ध
अमेरिकी उत्पादन बोइङ ७३७ को सुरक्षामा प्रश्न, चिनले लगायो तत्काल उडाउन प्रतिबन्ध वासिङ्टन। छ महिनाभित्रै दोस्रो पटक बोइङ ७३७ म्याक्स विमान उड्नासाथ दुर्घटना भएसँगै यसको सुरक्षामाथि प्रश्नचिन्ह उब्जिएको छ। दुबै दुर्घटनामा..
जभाभावी पार्किङ गर्ने सवारी साधनमा यस्तो ‘ह्वील लक’ गर्दै ट्राफिक प्रहरी
काठमाडौँ । ट्राफिक प्रहरीले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा जथाभावी पार्किङ गर्ने एक हजार ५४८ सवारी साधनलाई कार्यवाही स्वरुप ‘ह्वील लक’ (सवारी साधनको पाङ्ग्रामा साँचो) लगाएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकामा..
प्रहरीलाई प्रोत्साहन भत्ता, कुन पदको भत्ता कति ?
काठमाडौँ। गृह मन्त्रालयले ट्राफिक प्रहरीलाई प्रोत्साहन भत्ताका लागि प्रकृया अगाडि बढाएको छ। सडकमा खटिने ट्राफिक प्रहरीलाई प्रोत्साहन भत्ताका लागि तयार पारिएको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको हो। आज बसेको गृह मन्त्रीस्तरीय निर्णयले..
भूकम्पले क्षतिभएका घर नबनाउनेहरुको २३ करोड रुपैयाँ फिर्ता
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्पले क्षतिभएका घर नबनाउनेहरुबाट झण्डै रु २३ करोड फिर्ता गराएको छ । विभिन्न कारणले घर नबनाएका लाभग्राहीबाट सो रकम फिर्ता भएको प्राधिकरणअन्तर्गतको अनुदान व्यवस्थापन तथा..
महिनावारीका बेला हुने महिलाको खर्चमा दोस्रो स्थानमा नेपाल, एक महिलाको २ लाखसम्म खर्च
बीबीसी । महिलाहरू महिनावारी हुँदा धेरै खर्च हुने देशको सूचीमा नेपाल पाकिस्तानपछि दोस्रो स्थानमा रहेको बीबीसीले गरेको एउटा विश्लेषणमा देखिएको छ। त्यो विश्लेषणका लागि एशियाका विभिन्न १८ देशबाट तथ्याङ्क सङ्कलन..
आयो कालापानी-लिपुलेकसहितको आधिकारिक नेपालको नक्सा
काठमाडौं । मुलुकको परिवर्तित संरचनाअनुसार सातै प्रदेशलाई रेखाङ्कन गरिएको नेपालको प्रशासनिक नक्सा बिहीवारदेखि प्रचलनमा ल्याइएको छ । संघीयता कायम हुन अगाडि तयार गरिएका नक्सामा व्यवस्था गरिएका अञ्चल र पाँच विकास क्षेत्रको..
अर्बपतिको सूची सार्वजनिक, काइली बनिन् कान्छी अर्बपति, विनोद चौधरी १३४९ नम्बरमा
काठमाडौँ । अमेरिकाकी काइली जेनर आफ्नै बलबुतामा अहिलेसम्मकै संसारको सबैभन्दा कान्छी अर्बपति बनेकी छन् । फोर्ब्स म्यागजिनले सार्वजनिक गरेको सन् २०१९ को अर्बपति सूचिमा परेकी २१ वर्षीया जेनरले आफ्नो भाग्य शृङ्गारका..
सन् २०१८ मा नयाँ १९५ अर्बपति थपिए, कुन देशका कति ?
काठमाडौं । सन् २०१८ मा १९५ जना अर्बपति थपिएका छन् । बिजनेश म्यागेजिन फोर्ब्सले मंगलबार सार्वजानिक गरेको विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी हङकङ सहित चीनका अर्बपति थपिएका छन् । फोर्ब्सका अनुसार चीन..
ओसामा बिन लादेनको छोराको ठेगाना दिनेलाई अमेरिकाले ११२ करोड रुपैयाँ पुरस्कार दिने
एजेन्सी । अमेरिकाले आतंकवादी संगठन अल–कायदाका ग्याङ्गस्टार रहेका ओसामा बिन लादेनका छोरा हमजा बिन लादेनको ठेगाना बताउने मानिसका लागि पुरस्कार स्वरुप ठूलो धन राशीको घोषणा गरेको छ । जोकोही व्यक्तिले..
चीनको चमत्कार, आठ गगनचुम्बी भवनमाथि बनाइएको चामत्कारिक आकाशे पुल
एजेन्सी । इन्जिनियरिङ क्षेत्रकै चमत्कार मानिएको चीनको अति अपेक्षित ‘राफल्स सिटी छोङकिङ’ परियोजना सम्पन्न हुन लागेको बताइएको छ । विश्वचर्चित आर्किटेक्ट मोस साफदेले तयार गरेका यस आश्चर्यजनक ११ लाख वर्ग..
१२ वर्षपछि काठमाडौं उपत्यकामा हिमपात, कुन कुन ठाँउमा पर्यो हिउ ?
भक्तपुर । भक्तपुर शहरमा १२ वर्षपछि हिमपात भएको छ । भक्तपुरलगायत काठमाडौं उपत्यकामा आज बिहानै हिमपात भएको हो । भक्तपुरको नगरकोट, चाँगुनारायण, सुडाल, ताथली, चित्तपोल, नंखेल, सिपाडो, नलिन्चोक, गुण्डु, रानीकोट, घ्याम्पेडाँडालगायतका..
अधिकारीको निधनमा सरकारले दियो बिहीबार सार्वजनिक विदा
काठमाडौं । बुधबार आकस्मिक बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बिहीबार सार्वजनिक विदा दिने भएको छ । पर्यटन, संस्कृती तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित ७ जनाको हेलिकप्टर दुर्घटना भइ ताप्लेजुङमा निधन भएपछि सरकारले..
को हुन् मन्त्री रविन्द्र अधिकारी ? यस्तो छ उनको जीवनी
काठमाडौं। युवा पुस्तामा अति नै लोकप्रिय पर्यटन मन्त्री रबिन्द्र अधिकारी नेकपाका प्रतिभाशाली युवा नेता हुनुहुन्थ्यो । कास्की–३ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद अधिकारी संसदको विकास समितिका सभापति हुनुहुन्थ्यो । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा..
लगातार परेको हिमपातले मनाङ मर्न थाले चौँरी
मनाङ । महीनौँको निरन्तर हिमपातले मानव जीवन कष्टकर त छ नै, हिमाली जिल्लाको पहिचानका रूपमा रहेको मनाङमा चौँरीपालक किसान अहिले रुनु न हाँस्नु भएका छन् । महीनौँ दिनसम्म लगातार परेको..
अमेरिका स्थित नेपाली दूतावासले आफ्नै देशको क्षेत्रफल घटायो
काठमाडौं । अमेरिका स्थित नेपाली दूतावासले आफ्नो वेबसाइटमा नेपालका बारेमा भन्ने शीर्षकमा अंग्रेजी भाषामा राखेको विवरणमा नेपालको क्षेत्रफल करिब १ लाख ४७ हजार वर्ग किमी भनेर राखेकोमा सामाजिक सञ्जालमा आपत्ति..
अमेरिकी डिभी त पर्‍यो, तर अमेरिका होइन प्रहरी हिरासतमा बास
काठमाडौँ । डिभी लोटरी परेपछि अमेरिका उड्ने एकजना युवाको सपना नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रले अलपत्र पारिदिएको छ । डिभी लोटरी परेपछि अमेरिका जाने प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा चितवनका एक युवकले महाराजगन्जस्थित अमेरिकी..
यस कारण बन्दै छ हिजो आज विवाहभन्दा खर्चिलो व्रतबन्ध
गोदावरी । मौलिक रीतिथिति र संस्कृतिमा धनी मानिएको नेपाली समाजमा सकी नसकी त्यस्ता परम्परा धान्नै पर्ने मान्यता छ । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ कि पहरी जातिमा विवाह भन्दा पनि व्रतबन्ध..
यस्तो बन्यो नेपालको पहिलो भू–उपग्रह, वैशाख ४ गते प्रक्षेपण गरिँदै
काठमाडौँ । नेपालको पहिलो भू–उपग्रह तयार भएको छ । नेपाली–स्याट–१ नाम दिइएको भू–उपग्रह तयार भएको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)का उपकुलपति सुनिलबाबु श्रेष्ठले जानकारी दिए । शुक्रबार जापानस्थित क्यूसू..
‘अहो, बिहे गर्ने बेला भएन र रु’ उमेर चढ्दै गएपछि अक्सर युवायुवतीले झेल्ने प्रश्न हो यो । यसको स्पष्ट आशय के बुझिन्छ भने, निश्चित उमेर भएपछि विवाह गर्नैपर्छ । विवाह एक..
ओली सरकारका ११९ बुँदे १ बर्षे प्रगति हेर्नुस के के छन्
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गरेका छन् । सरकार गठन भएको एक बर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गरेका कामको विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् । सम्बोधनमा ओलीले सरकारको पहिलो वर्ष..
‘भ्यालेन्टाईन्स डे’ बारे १० रहस्य: सैनिक वलिदानीदेखि क्याडबरी चक्लेटसम्म !
काठमाडौं । हरेक फेब्रुअरी १४ मा युवाहरुमाझ लोकप्रिय रहेको ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ कहाँबाट सुरु भयो थाहा छ त रु कसरी यो चर्चित भयो रु प्रेम वा अनुभुतिको त्याग र वलिदानबाट सुरु..
हामी कहाँ सहरी तथा सहरोन्मुख क्षेत्रमा घरजग्गाको मूल्य चुलिएको छ । सानो तिनो रकमले जग्गा किन्न गाह्रो छ । तर, इटालीको एउटा सहरमा चाहीँ घरजग्गा किन्दा पैसा तिर्नुपर्दैन । उल्टै..
एकैदिन जुधे तीन फिल्म : ‘गोपी’, ‘सय कडा दश’ र ‘रणवीर’मा कसले मार्ला बाजी ?
काठमाडौं । नेपालमा सातामा २र३ वटा चलचित्र प्रदर्शनमा आउनु अब नौलो रहेन । चलचित्र प्रदर्शनमा आउँछन् केही दिनमै उत्रिन्छन् । दर्शकले प्रदर्शनमा आएको र उत्रिएको समेत पत्तो पाउँदैनन् । गत साता..
स्ववियु चुनाव फाल्गुनमै हुने, सम्पूर्ण क्याम्पसलाई पत्राचार
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावको तयारी गर्न सम्पूर्ण आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई परिपत्र गरेको छ। विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले सोमबार सम्पूर्ण क्याम्पसलाई पत्राचार गरेर..
के तपाईं वर वा बधूको खोजीमा हुनुहुन्छ ? अनलाइनबाटै यसरी खोज्नुहोस् !
काठमाडौ । के तपाईं वर वा बधूको खोजीमा हुनुहुन्छ ? यदि तपाईं विवाह गर्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ र आमाबुबाले मागी विवाहको प्रबन्ध गरेका छैनन् भने अब अनलाइन पोर्टलमार्फत वरबधु खोज्न सक्नु..
Results 266: You are at page6of 9